पुरुषसँग मेरो पहिलो रात - तसलिमा नसरिन - Likhu Online
२ मंसिर २०७७, मंगलवार २०:४४ प्रकाशित
तसलिमा नसरिन– मयमनसिंहमा प्राइभेट कोठा नपाइए पनि ढाकामा पाइन्छ भनेर रुद्र भनिरहन्थ्यो　। तर, म कसरी ढाका जान सक्थेँ र ! रेलमा चढेर एक्लै जान त सक्थेँ होला, तर घरबाट अनुमति देलान् र ! अन्त्यमा सान्दाइ मयमनसिंह आएका वेला ढाका जान जिद्दी गरेँ　।
‘पहिलो वर्षको जाँच पास गरेको प्रमाणपत्र लिन ढाका जान्छु,’ भनेँ　। ढाका पुग्नेबित्तिकै ‘एकजना साथीलाई ढाका विश्वविद्यालयको होस्टेलमा भेट्न जान्छु’ भन्दै सान्दाइको कोठाबाट हिँडेँ　। र, सीधै रुद्रको कोठा गएँ। तर, रुद्र खुसी भएन। खुसीमा उफ्रिनु वा पीडामा आँसु झार्नु रुद्रका लागि असम्भवप्रायः थियो ।
शिरदेखि पाउसम्म ऊ रूखको ठुटोजस्तै थियो　। ऊ आफ्ना अनुभूति बाहिर देखाउँदैनथ्यो　। रुद्रले मलाई साडी लगाउन दियो　। सेतो साडीमा स–साना फूलका बुट्टा थिए　। पेटीकोट र ब्लाउज पनि साडीसँग मिल्ने थिए　। रुद्रकी बहिनी विठीले छानेकी थिई यो साडी　। रुद्र आफैँले मलाई साडी छानेर कहिल्यै दिएको थिएन　।
पहिले उसले दिएको हरियो सुती साडी पनि उसकी साथी मुक्तिलाई छान्न लगाएको थियो　। मचाहिँ रुद्रलाई जन्मदिनमा दिने उपहार आफैँ छानेर किन्थेँ　। कुन रङको सर्टसँग कुन रङको पेन्ट मिल्छ, म आफैँ छान्थेँ　। अरूलाई साडी छान्न लगाउँदा रुद्र मेरो रूपरंगबारेमा भन्ने गर्थ्यो, अलि कालीखालको केटीलाई जुन सुहाउँछ, त्यही　।’
रुद्रले मुक्ति र विठी दुवैलाई हाम्रो गुप्त बिहेबारेमा भनेको रहेछ　। त्यो रात उसले मलाई चाइनिज रेस्टुरेन्ट लिएर गयो। खाना खाएर हामी फर्कियौँ। मैले हाम्रो बिहेबारेमा कसैलाई बताएकी थिइनँ　। रुद्रचाहिँ बिस्तारै सबै मान्छेलाई बताउन थालिसकेको थियो　।
नचाहँदा–नचाहँदै पनि म रुद्रलाई जोडजोडले धकेलिरहेको थिएँ　। रुद्रले एक हातले मेरो ब्लाउजको टाँक खोल्यो　। उसको ओसिलो जिब्रो मेरो छातीमा चलमलाउन थाल्यो　। अस्तव्यस्त साडीमा अल्भिएर म उसको अँगालोमा निस्सासिरहेँ　। ‘हेर केटी, आफ्नो लोग्नेले भनेअनुसार गर　। खुट्टा फाडेर राख　।
यही नै त हो तरिका ’ मैले आफूलाई बारम्बार यसो भनिरहेँ　। त्यसपछि मैले पूरै शरीर छाडिदिएँ　। आँखा चिम्लँदै म आफू त्यहाँ नभएको परिकल्पना गरेँ　। ‘यो मेरो शरीर होइन　। यहाँ जे–जस्तो अश्लील काम भइरहेको छ, त्यसमा म पटक्कै संलग्न छैन। यो म होइन। यो अरू कसैको शरीर हो,’ म यस्तै–यस्तै सोचिरहेकी थिएँ　।
त्यसपछि रुद्र ममाथि उक्लियो　। अब मेरो आँखामात्रै होइन, सासै बन्द भयो　। तैपनि, यसलाई मैले आफ्नै लोग्नेले गरेको स्वाभाविक प्रक्रिया भनेर चित्त बुझाउन खोजेँ　। तर, मेरो यो मनचिन्ते विचारको प्रक्रियालाई तोडेर घाँटीबाट चिच्चाहट निस्कियो　।
रुद्रले दुवै हातले मेरो मुख बन्द गरिदियो　। मलाई असहय पीडा भयो　। रातभर रुद्रले हरेक तरिका अपनायो　। सामान्य रूपमा अपनाइने सबै विधि अपनायो, तर हरेकपटक रातलाई चिर्दै ऐआ मरेँ भनेर म चिच्चाउन छाडिनँ　।
प्रत्येकपटक मेरो चित्कारलाई रोक्न रुद्रले मेरो मुख थुन्नु पर्‍यो　। जब यो कहालिलाग्दो रात सकियो, थकित मैले साडी फेरेर कुर्ता–सुरुवाल लगाउँदै भनेँ, ‘म जान्छु　।’ मुन्टो निहुर्‍याउँदै आँखा झुकाउँदै मेरो बेकामे शरीर लिएर म टाढा जान चाहन्थेँ　। रातको डर, लाज र घिनले बिहान पनि मलाई छाडेन　। अपराधबोध पनि भयो मलाई　। रुद्र मलाई ‘रुद्र’ जस्तै लाग्यो　।
मेरो लोग्नेजस्तो कति पनि लागेन　। घर छिर्ने वेला बाटोमा उसले भन्यो, ‘राति नाटक नगरेकी भए राम्रो हुन्थ्यो　।’ त्यसबाहेक उसले केही भनेन　। न त मैले नै केही भनेँ　। म रातिको घटनालाई सम्भिएर चुपचाप बसेँ　। त्यो सबको साटो बरु रातभरि पढेर, गफ गरेर, कविता वाचन गरेर वा निश्चल चुम्बनमात्रै गरेर बसेको भए ? बिहान सान्दाइको कोठामा पुगेर मैले काँपेको स्वरमा भने, ‘म झुनू सानिमाको कोठामा रोकेया हलमा थिएँ　।’ ‘झुनू सानिमा आजकल त्यहाँ बस्दिनन्,’ सान्दाइले भन्नुभयो　।
मानौंँ म भर्खरै सिंहको ओडारबाट फर्किएकी हुँ　। हिँड्दा पनि कम्मर दुख्न थाल्यो　। पीडाले गर्दा मैले राम्रोसँग पिसाब फेर्न पनि सकिनँ　। आफ्नोे स्तन पनि ढुंगाको थुप्रोजस्तो लाग्यो　। उसको चुम्बनको दाग बिस्तारै हरायो　। मैले बिहेको कागजातमा सही गरेदेखि नै रुद्रले एकरात सँगै बिताउने कुरा गरिरहेको थियो　। तर, बिहेभन्दा अगाडि पनि उसले मलाई कम गिजोलेको थिएन　।
प्रत्येकपटक भेट्दाखेरी रुद्र मलाई चुम्बन गर्न र छातीमा हात राख्न झम्टिहाल्थ्यो　। तर, मैले आफूलाई बचाउन सकेकी थिएँ　। मसुदको घरमा हामीलाई बस्न दिइएन　। यही कारणले रुद्र मसँग निकै समय रुष्ट भएको थियो　। मसँग एकरात बिताउनु उसका लागि किन यति अमूल्य ? हो ? मैले कहिल्यै बुझ्न सकेकी थिइनँ　। मैले उसलाई प्रतीक्षा गर्न आग्रह पनि गरेकी थिएँ　। पर्खाइको पीडाको प्रतिफल पनि राम्रै हुन्थ्यो होला　।
कुनै पनि हालतमा ऊ मसँग एकरात बिताउन चाहन्थ्यो　। यसरी एकरात बिताइयो, त्रासदीपूर्ण रात　। मेरो जीवनमा यस्तो होला भन्ने सोचेकै थिइनँ　। मेरो मन दुख्यो　। रुद्रलाई धकेलेर हुत्याउन चाहेकी थिएँ　। तर, त्यसो गर्न सकिनँ　। म अपांगसरी भएँ　। त्यही कागजको अगाडि म हारेँ　। त्यस हस्ताक्षरको अगाडि म पराजित भएँ　। किनभने, त्यही हस्ताक्षरको मतलब नै विवाह थियो　। तर, म रुद्रलाई माया गर्थें　। मैले सोचेँ–मेरो सोच र विचारले मलाई एकैसेकेन्ड पनि चैनपूर्वक बस्न दिएन　। मैले सान्दाइसँग झुट बोलेँ　।
मायामा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विश्वासको हो　। यो विश्वासको डोरी अलिकति कमजोर भयो भने माया गरिँदैन　। मनमात्र पराइन्छ　। रुद्रले एउटा चिट्ठीमा लेखेको थियो, ‘के म त्यस्तो अभागी हो, जसले सबै कुरा बलजफ्ती ठीक पार्नुपर्छ ?’ यस घटनाको वर्ष दिनपछाडि रुद्रले लेख्यो, ‘प्यारी अर्धाङ्गिनी, त्यस रात के भयो थाहा छ तिमीलाई ? पहिलोपटक तिमीलाई साडीमा देख्दा तिमीलाई एकदम भिन्न पाएँ　।
नयाँ मान्छेजस्तै　। विगतमा मैले तिम्रो अरू नै चीज मन पराएको थिएँ　। तर, यो पटक फरक छ　। एकदमै अन्जानखालको आनन्द ! हाम्रो प्रेम नै भर्खर सुरु भएझैँ लाग्यो　। यस्तो लाग्यो ‘पहिले रिहर्सलमात्र थियो　। आजचाहिँ रंगमञ्चमा मञ्चन गर्दै छौँ　।
विगत डेढ वर्षमा रुद्र दुई–तीन महिनाको अन्तरालमा मयमनसिंह आइरहयो　। मैले उसलाई सम्बोधन नगरेकाले रिसले गर्दा उसले पनि मलाई सम्बोधन नगरीकन पत्र पठायो　। हाम्रो समय प्रेस क्लबको क्यान्टिनमा बित्थ्यो　। क्यान्टिनबाट निस्कनुपर्दा हामी उपयुक्त स्थानको खोजीमा यताउति भौँतारिन्थ्यौँ　। तर, सदाझैँ ठाउँ पाउन मेरा लागि असम्भव थियो　। रुद्रको अनुरोधमा मैले साडी लगाएर उसलाई भेट्न गएँ　।
मलाई साडी लगाउन राम्रोसँग आउँदैनथ्यो　। यास्मिनको सहयोगमा आमाको साडी लगाएर म साथीको जन्मदिन छ भनेर घरबाट हिँडेँ　। त्यो दिन अलि एकान्तको फाइदा उठाउँदै रुद्रले मलाई दुई–तीनपटक चुम्बन गर्‍यो र छातीमा हात मुसार्न भ्यायो　।
यदि यही तरिकाले तिमीले मलाई अलि–अलि माया दिन थाल्यौ भने तिमीले देख्नेछौ( म कसरी तिम्रो चाहना बन्नेछु अर्थात् तिमी मेरी बन्नेछौ　। वास्तवमा माया भनेको दुई मुटु एक हुनु त हो नि, मलाई सडकमा उभिएर सबैलाई चिच्याउँदै सुनाउन मन छ, ए मान्छे सबैजना सुन　। मैले माया गर्ने मान्छे भेट्टाएँ　। हामी एकै भयौँ　। राम्ररी बस प्रिय। मेरो जीवन, आफ्नो ख्याल गर　। तिम्रो रुद्र　। ‘वाइल्ड विन्ड’ पुस्तकबाट साभार